Khadadka dusha sare ee polylines (Tallaabada 1) - Goofumed
Contours ka polylines (Step 1)
Abriil, 2010 AutoCAD-AutoDesk, topografia
Ka hor inta aan aragno sida abuuraan dulal laga bilaabo shabakad dhibco lagu qaatay berrinka. Hadda waxaan arki doonaa sida loo sameeyo, laga soo bilaabo curveyaasha jira ee khariidada la marsiiyey.
Sidii aan ku sameynay naqshad wadada, bal aynu jebino tallaabooyinka, sidaas darteed boostada kama soo baxayso waqti dheer shimbireed.
Tan awgeed, haddii aad leedahay iskudhafyo yar oo UTM ah, shaqadu aad bay u fududdahay. Xaaladdan oo kale, isgoysyada iskuduwaha ee ku dhow dhammaadka ayaa la aqoonsaday, haddii laga heli lahaa geesaha waxay ahaan laheyd tan ugu fiican.
Dhibcaha waxaa la geliyaa amarka dhibic, iyo galitaanka iskuduwaha ay ku kala go'een comma, sida ku cad sawirka hoose. In loo beddelo qaabka dhibic loo beddelo astaan ​​muuqata, waa laga sameeyay Qaab> qaab dhibic. Laakiin maadaama noocyadan 'Civil 3D' ah ay adkeynayaan helitaanka menu-ka Tools, waxaad u qori kartaa da'da: ddptype markaa ka dib khadka taliska, ka dib geli oo waxaan doorannaa nooca dhibicda.
Qaybtan qariibka ah ee Microstation, halkaas oo dhibic uu yahay line of eber eber, oo wuxuu yeelan karaa dhumuc jilicsan oo leh aragtida map.
Hadda waxaan ku dhejinaynaa sawirka, isticmaalka Geli> Diidmada muuqaalka Raster. Waxaan kuu daynay inaad karti u siiso fursadaha inaad dhigato Goobta galinta y miisaanka shaashadda.
Ka dibna ku dhaji dhibicda bidix ee iskudhafka iyo dhaqaajinta jiirka illaa aad aragto in image uu yahay qiyaasta qiyaasta.
Haddii sawirku daboolayo dhibcaha, dib u celi. Tan waxaa lagu sameeyaa Qalabyada> Amarka muujinta> U dir gadaal.
Waxaan u baahanahay dhibco sawirka ah oo u dhigma kuwa aan soo galnay iyadoo la adeegsanayo iskuduwaha. Taas awgeed, waxaan ku biireynaa xariiqyada yar, si aan u helno isgoysyada.
Isticmaalka amarka Khariidad> Qalabka> Xaashida Rubber, sida aan u isticmaalnay dhowr maalmood ka hor beddelaya qaybaha kala duwan, waxaan ku tilmaameynaa qodobka cagaaran saldhig ahaan, ka dibna kan cas sida tixraac ahaan. Markaan horeyba ugu qabannay afarta, markaa waan sameynaa geli amarkuna wuxuu na weydiinayaa inaan doorano walxaha si aan u beddelno. Waxaan qornaa ereyada S, doorashada Dooro, oo waxaan taabannaa sawirka, ka dibna waan sameynaa geli wakhtigii ugu dambeeyay oo aan haysano.
Aad isku midka ah waxa dunta del Maamulaha Raster gudaha Microstation. Sida aan u sharaxeyno goorta sawirada sawirada laga bilaabo Google Earth.
Eeg sida hadda sawirku u dhigmayo dhibcaha casaanka, kuwa cagaaran waa la baabi'in karaa. Hadda sawirku waa jaangooyooyin iyo miisaanka ku habboon si loo bilaabo dijitaalka. Xidhiidhkan waa Waxaad arki kartaa tallaabada 2 inaad dhameeysid layligan.
Post Previous" Hore Badhanka midigta
Post Next Contours ka polylines (Step 2)Next »
5 Jawaab ah "Khadadka khadadka polylines (Tallaabada 1)"
Oh,, ma aanan ogayn in uusan jirin wax xiriir ah oo la xiriira tallaabada xigta. Dhamaadka boostada waxaan tusay sida loo arko maqaalka halka dhameystirka jimicsiga lagu xusay.
EDUARDO O'CONNOR isagu wuxuu leeyahay:
Aad u xiiso leh, amaradaasi waxay isticmaalaan maalin kasta. Tallaabooyinka ku xiga si aad u hesho wareegto baaritaan ah, sidee baan u helayaa?
lourdes mendez isagu wuxuu leeyahay:
Hello, mawduucan aad u xiiso badan. Sideen u soo dejin karaa macluumaadkan faa'iido leh?
Run, waxay kaliya isku bedeshaa, iskeedeysaa oo dhaqaaqdaa. Ma jiro wax go'ay oo intaas ka sii badan, sidaan arkay.
Waad salaaman tihiin… Mawduuca waa mid xiiso leh, si daacad ah waligay uma isticmaalin amarkaas «Sheet Rubber».
Marka ay fulinayaan xayiraad ku saabsan amarkaan, haddii ay muuqato sawirka? o Kaliya kor u qaadista sawirka.
Sidoo kale waafaqsan dukumiintiyada autocad, waxaa suurtagal ah kaliya dhibcaha ugu sareeya ee 4 (marka laga hadlayo meesha) ma runbaa? Maxaa dhacaya haddii sawirku uu googo'eg yahay bartamaha sawirka?